​तीन जनाको ज्यान लिएको, तर कसैले नदेखेको ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिए ‘बाजेको सेकुवा’का मालिक
Tuesday, 17 Apr, 2018 4:12 PM
४ बैशाख, काठमाडौं । तीन जनाको ज्यान गइसकेको ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा चर्चित रेष्टुरेन्ट ‘बाजेको सेकुवा’का सञ्चालक पनि तानिएका छन् । सुन तस्करीमा लगानी गरेको आशंकामा प्रहरीले रेष्टुरेन्टका सञ्चालक चेतन भण्डारीमाथि छानविन अघि बढाएको हो । उनको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्न पत्राचार गरेको छ।
विमानस्थलबाट तस्करी भएको ३३ किलो सुन अहिलेसम्म प्रहरीले पनि भेट्न सकेको छैन । सुन कोसँग कहाँ छ अनुसन्धानमै छ । तर, यही सुनका कारण तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ । सुन भरिया सनम शाक्यको मोरङमा हत्या भइसकेको छ भने अन्य दुई जनाले प्रहरी हिरासतमा आत्महत्या गरेका छन् ।
यो सुन प्रकरणका नाइके चुणामणि उप्रेती ‘गोरे’ रहेको प्रहरीको ठहर छ । प्रहरी गोरेको खोजविनमा लागेको छ । चेतन भण्डारी उनै गोरेको आफन्त रहेको प्रहरीले जानकारी दियो ।
यो काण्डमा काठमाडौं न्यूरोडका चर्चित सुन पसलका सञ्चालकहरु पनि पक्राउ परेका छन् । विमानस्थलका कर्मचारीदेखि सुन व्यापारीसम्मको सेटिङमा विगत ५ वर्षयता व्यापक रुपमा सुन तस्करी भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसो त सार्वजनिक गरिनसकेको भएपनि प्रहरीले सुन तस्करीमा प्रहरी अफिसरहरुकै संलग्नता रहको पनि बताएको छ ।
भण्डारी तस्करीमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभई उप्रेतीलाई तस्करीका लागि लगानी गरेको अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले बताए। स्रोतका अनुसार भण्डारी नाताले उप्रेतीका भान्जा पर्छन्।
गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सनम हत्या तथा तस्करीमा संलग्न २० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। केही विशिष्ट व्यक्तिहरुसमेत तस्करीमा संलग्न देखिएको स्रोत बताउँछ।
थाई एयरलाइन्सका ८ तथा नेपाल एयरलाइन्सका ३ जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरी हिरासतमा आत्महत्या गनेै प्रेमलाल चौधरीले तस्करीमा संलग्न नेपाल एयरलाइन्सका लोडर थिए । थाइ एयरलाइन्समा कार्यरत सानु बम पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको केही दिनमै आत्महत्या गरिसकेका छन् ।
यस्तो छ ३३ किलो सुन काण्ड, को–को पक्राउ परे ?
तस्करीको ३३ किलो सुन काठमाडौंबाट विराटनगर लैजाने क्रममा गत माघमा हराएको थियो। सुन लुकाउनेहरुसँग मिलेको आशंकामा शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिई सोही गिरोहका व्यक्तिहरुले कुरा खोल्न करेन्ट लगाएका थिए। त्यही क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएपछि चारकोशे झाँडीमा शव लुकाउन लैजाँदै गर्दा फागुन १९ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले गाडिभित्रै शव बरामद गरी मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र टेकराज मल्ल ठकुरीलाई पक्राउ गरेको थियो। हत्या गरिएका शाक्य सोही समूहमा एकाउन्टेन्टका रुपमा कार्यरत थिए।
घटनामा संलग्न राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ पनि पक्राउ परिसकेका छन्। उनै गुरुङले तस्करीका लागि विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएका थिए। उनी २० वर्षअघि एयरपोर्टमा संगठित रुपमा सुन तस्करी गर्ने गिरोहमा आबद्ध व्यक्ति हुन्।
त्यस्तै, भारतीय व्यापारी महावीर गोल्यानसहित प्रहरीले बालकृष्ण श्रेष्ठ, कपिलराज पुरी, गोपालकुमार श्रेष्ठ, दोराम खत्री, सम्बिरप्रसाद तोलाङे, हेमन्त गौतम, पुण्यप्रसाद लामा, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजन थापा, लालबहादुर मगर र राजु महर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ। आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य र जय मातादी गोल्ड प्यालेसका पवन अग्रवाल पनि पक्राउ परिसकेका छन्।
त्यस्तै, हत्यामा सहयोगी भूमिका खेल्ने लाक्पा शेर्पा र मदन घिमिरे समेत मोरङ प्रहरीको हिरासतमा छन्। पक्राउ परेका उपर मोरङ प्रहरीले कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको छ।
ककसको सम्पत्ति रोक्का ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टका सञ्चालक भण्डारीसहित मोहन अग्रवाल, रमेश उप्रेती, नर्वदा खरेल उप्रेती, रक्षा भण्डारी, प्रयास पराजुली, रोहित आचार्य, कृष्ण बस्नेत, मोहमद उस्ताम मिया, भविन राई (भविन तामाङ), कमल कार्की, सन्दीप खड्का, सुनिल अग्रवाल, प्रमोद श्रेष्ठ, डोलेन्द्रप्रसाद खरेल, दावा शेर्पा, भोजराज भण्डारी, दुर्गा खरेल (उप्रेती), भीमकुमारी खरेल, सुरेन्द्र गौतम लगायतको बैंक खाता तथा सम्पती रोक्का राखेको छ।